Gabriel Martinelli oo ammaan ka helaya mid ka mid ah halyeyada kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 28 Jan 2020. Da’ayarka reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Arsenal ee Gabriel Martinelli ayaa ammaan xoogan ka helaya halyeeyo badan ee kubadda cagta ah.
Daafacii hore kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London Gunners ee Martin Keown ayaa qeyb ka soo noqday shaqsiyaadka sida aadka ah ula dhacsan qaab ciyaareedka uu Gabriel Martinelli ka sameynayo Arsenal.
Martinelli ma uusan dhalinin gool kulankii xalay ay kooxda Bournemouth 1-2 kaga adkaadeen, ciyaar ka tirsaneyd kulamada wareega afaraad ee koobka FA Cup, laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaa ahaa mid aad u fiicnaa.
Haddaba halyeeyga kooxda Arsenal ee Martin Keown oo ka hadlay da’ayarkan reer Brazil ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan dareemayaa in ciyaartoygan uu yahay nin aad u da’aweyn, inkastoo uu da’ayar yahay, xilli kasta waa mid dhaqaaqaya, wuxuuna awood u leeyahay inuu gaaro go’aannada saxda ah ee garoonka dhexdiisa”.
“Waxaan u maleynayaa in Mikel Arteta ay awood u leedahay inuu horumariyo, si uu u gaaro heerka Raheem Sterling ee kooxda Manchester City”.
Zinedine Zidane oo ka hadlay xilliga uu soo laabanayo Eden Hazard